Tiaras၊ ကျောက်တုံးသုံးခု၊ HIGH ရတနာအိပ်မက်
Sussex ၏မင်းများလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအပြီးတွင် Christie's Important Jewels အရောင်းပြခန်းတွင်ဇွန် ၁၃ ရက်၌တာယာ၊ ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များနှင့်ငါးမျှားတံများကိုသရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ဇြန္လ 11, 2018
မကြာသေးမီက Duke နှင့် Sussex ၏ Duchess တော် ၀ င်မင်္ဂလာပွဲသည်mediရာမဖျန်ဖြေပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီး၏တာရာရာ၊ သူမ၏ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်သုံးကွင်းနှင့်ညနေ reception ည့်ခံပွဲတွင်သူမ ၀ တ်ခဲ့သည့်ငါးမွေးကန်များသည်ရတနာဝါသနာရှင်များအမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
Wပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလန်ဒန် hileဘယ်လိုသက်သေခံတယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ် တော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင် ရတနာကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ပုံဖော်နေသည်။ Aquamarines နှင့်ကျောက်တုံးသုံးချောင်းရှိသောကွင်းများသည်လှပသောတာယာယာများဖြင့်သရဖူဆောင်းထားသည့်ပြတင်းပေါက်ဆိုင်အားလုံးတစ်ခုလုံးကိုအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့သည်။
မိန်းမတိုင်းသည်မင်းသမီးသို့မဟုတ်မင်းသားနှင့်လက်ထပ်ရန်အိပ်မက်များဖြစ်သည်။ “ Meghan စတိုင်ရတနာ” ၏များပြားလှသောကမ်းလှမ်းမှုများသည်လူအချို့ကိုသူတို့တ ဦး တည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံစားရစေမည်မှာသေချာသည်။
Christie ရဲ့မှာလမ်းကြောင်းသစ် Catching ။
ခရစ်ရဲ့လန်ဒန်မှာလာမည့် အရေးကြီးသောရတနာ အရောင်း (King Street, ဇွန် ၁၃ ရက်) သည်အရေးကြီးသောတာယာများ၊ ထပ်တူထပ်မျှအရေးကြီးသောကျောက်တုံးသုံးခုကျောက်တုံးများနှင့်လှပသောငါးပုလဲရတနာများကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့လေးတာယာတင်ဆက်လိမ့်မည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် Art Deco အချိန်ကာလအကြား၌တည်ရှိသောဤတာယာများသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောအိပ်မက်များကိုဖန်တီးပေးသည်။
သူတို့၏ရှေးဟောင်းလက်ရာဖြစ်သည့် - ယနေ့ပုံတူကူးရန်ခက်ခဲသောအနုပညာတစ်ခု - နှင့်သူတို့၏ကျောက်မျက်များသည်သူတို့၏အလှအပကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေသည်။
ဒီ ensemble ၏ပထမ ဦး ဆုံးတာယာနှစ်ခုနှစ်ခုစိန်နှင့် Emerds နှင့်အတူထူးခြားဒီဇိုင်း, 19 ရာစုနှောင်းပိုင်းမှရက်စွဲပါနေကြသည်။
Lot 106 - နှောင်းပိုင်း ၁၉ ရာစုမြနှင့်တီယာတာရာ
Drop-shaped နှင့်ဘဲဥပုံ cabochon မြ, ဟောင်းနှင့်နှင်းဆီဖြတ်စိန်, ငွေနှင့်ရွှေ, 1880 ခန့်, အတွင်းလုံးပတ် 24.5 စင်တီမီတာ
ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ပုလဲဓာတ်ခွဲခန်းအစီရင်ခံစာ - ကိုလံဘီယာ၊ အလယ်အလတ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (အလယ်ဗဟိုမြသုံးခု) ၏သက်သေသာဓက။
မူလကတော်ဝင်မိသားစု၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည် မြနှင့်စိန် Tiara (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၁၀၆ တွင်ကြည့်ပါက) ငွေနှင့်ရွှေတို့အပေါ်အရေးကြီးသော drop-shaped နှင့်ဘဲဥပုံ cabochon မြမြများပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ၁၈၈၀ ခန့်တွင်တည်ရှိသည်။
Lot 62 - နှောင်းပိုင်း ၁၉ ရာစုမြနှင့် DIAMOND TIARA / လည်ပင်း
စတုရန်းလေးထောင့်မှန်စတုဂံပုံဖြတ်ထမးများ၊ နှင်းဆီဖြတ်စိန်၊ ငွေ၊ ရွှေ၊ ၁၈၉၀ ခန့်၊ ၃၅.၀ စင်တီမီတာနှင့်အတူ၊
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှဤတာရာသည်ခေတ်၏အရသာနှင့်ကိုက်ညီသောလှပသောပန်းချီကားများကိုတွေ့ရသည်။ ဒီဇိုင်းကိုပုလဲများ၊ မြများနှင့်စိန်များဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမြနှင့် DIAMOND TIARA / လည်ဆွဲ။ လည်ဆွဲအဖြစ်သတ်မှတ်မည်
ဒုတိယအုပ်စုတွင်သမိုင်းကြောင်းအရအရေးကြီးသည့်အရာနှစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ နှစ် ဦး စလုံးစိန်နှင့်အတူနှစ် ဦး စလုံးတော်ဝင်နှင့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် provenance နှင့်အတူထားကြ၏။
ပထမရတနာတစ်ခု Boucheron ကလက်မှတ်ထိုးထားသော Art Déco Diamond Tiara / လည်ဆွဲ.
ART DÉCO DIAMOND နှင့်တုပ DIAMOND TIARA / NECKLACE, BOUCHERON
၁၉၃၅ ခန့်တွင် ၄၈.၅ စင်တီမီတာ၊ Tiara ဘောင်ပါသည့်စက်ဝိုင်းနှင့်အဟောင်းဖြတ်ထားသောစိန်များ၊ တုပသည့်စိန် ၂၂ လုံး၊ မူရင်းတပ်ဆင်ထားသောရေတပ် Boucheron အမှုနှင့်အတူ Boucheron RM လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ယခင်ကဂုဏ်ထူးဆောင်ဆာဟင်နရီ -Norman ၏ဇနီးနှင့်ဒုတိယ Baron Aberconway မှ Henry Duncan McLaren တို့၏ဇနီး Mrs Anne Norman ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ Mrs Norman သည်Château de la Garoupe တွင်နေထိုင်ပြီး Cap d'Antibes ရှိအရေးပါသောအိမ်တစ်လုံးတွင်သူမ၏အဘိုးဖြစ်သူ Charles Benjamin Bright McLaren၊ 2st Baron Aberconway တွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၄ င်းEnglishက ၄၀ Englishကတွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်Châteauသည် Cole Porter နှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်ပါပလော Picasso အပါအဝင်ထိုအချိန်ကနာမည်ကြီးလူအများတက်ရောက်ကြသည်။
ဤသည် tiara, လူကြီးလူကောင်းများ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု, မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်သက်သေပြနှင့်အတူပါရှိသည်။ ယခင်ကမစ္စစ်အန်းနော်မန်း၊ ညာဂုဏ်ထူးဆောင်ဆာဟင်နရီ -Norman ၏ဇနီးနှင့်ဒုတိယဘရွန် Aberconway ၏ဟင်နရီဒွန်ကန်မက်လာရန်တို့၏သမီးဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသော ELPOQUE DIAMOND TIARA ။ လည်ဆွဲအဖြစ်သတ်မှတ်မည်
နောက်ဆုံး tiara သည်အဖိုးတန်ဆုံးဖြစ်ပြီး Royal Pedigree ရှိခြင်းသည်ယခင်ယူဂိုဆလားဗီးယား၏ HRH ၏သရဖူမင်းသမီး၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးOrléans-Braganza ၏စုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာ အရေးကြီးသော Belle Époque Diamond Tiara.
အရေးကြီးသော ELPOQUE DIAMOND TIARA
သစ်သား၊ သစ်တော်သီးနှင့်နှင်းဆီဖြတ်စိန်များ၊ ပလက်တီနမ်၊ ၁၉၀၅ ခန့်၊ အတွင်းလုံး ၀ ၂၁.၂ စင်တီမီတာ
Louise Françoise Marie Laure d'Orléans၊ စပိန်နိုင်ငံမှ Bourbon-Two Sicilies နှင့် Infanta မင်းသမီး (၁၈၈၂-၁၉၅၈)
Maria de la Esperanza, Bourbon-Two Sicilies မင်းသမီး (၁၉၁၄-၂၀၀၅)
၁၉၉၂ မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ်အထိ (၁၉၉၄) (၁၉.၁၄၆) သူသည် St. Moritz ရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာလေလံပွဲမှတစ်ဆင့်ဤတာယာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် Maria အားGlória d'Orleans-Braganza၊ Segorbe မှ Duchess၊ Rivadavia မှ Countess နှင့်ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ၏သရဖူမင်းသမီး (ခ ၁၉၉၄) သည်။
မင်းသမီး Louise d'Orleans သည် Belle Époqueစိန် tiara ကိုဝတ်ဆင်။
ဤအရာနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး Vincent Meylan (မေလ ၂၀၁၈) မှရေးသောစာစီစာကုံးမှ။
ဒီစိန်တာရာကိုမင်းသမီး Louise ကိုပေးပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးခဲ့ပါတယ် 20 ရာစု၏ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်ပေါင်း။ ၎င်း၏လခြမ်းလွန်းပုံသည်ဆင်တူသည် အခြားတော်ဝင်တာယာ။
ပထမအားဖြင့်စိန်နှင့်ပုလဲတို့ကိုဘုရင်ဂျော့ခ်ျမှပေးခဲ့သည် V နှင့်သူ၏ဇနီးဘုရင်မ Mary တို့သည်သူတို့၏တူမဖြစ်သော Fife of Princess Alexandra ဖြစ်သည် ၁၉၁၃ တွင်သူမ၏ဝမ်းကွဲဖြစ်သော Connaught ၏မင်းသားအာသာနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါရတနာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခဲ့သည် ဗြိတိန်သရဖူမှရတနာတစ်ခု Garrard သည်။ နှင့်အတူအလွန်ဆင်တူတစ်စက္ကန့် စိမ်းနှင့်စိန်များကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင်ဘုရင်ဂျော့ခ်ျ V မှလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည် သူ၏သမီးယောက္ခမဖြစ်သူ Lady Elizabeth Bowes Lyon အားနယူးယောက်မြို့ Duchess ၏အနာဂတ်အတွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငယ်ရွယ်သော Duchess သည်စိန်၏အထက်တန်းကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည် ရတနာ "ပိတ်လိုက်" Infanta Louise ၏တာရာသည်ဗြိတိသျှတို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် သက်သေပြချက်။ ရတနာ၏ပုံစံအပြင်အခြားအချက်နှစ်ချက်ကလည်း၎င်းကိုအကြံပြုသည် အမွေအနှစ်။ ပြင်သစ်တော်ဝင်မိသားစုသည်အင်္ဂလန်တွင်ပြည်နှင်ခံအဖြစ်နှစ်ဆယ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ, ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, မင်းသမီး Louise နှင့် Infante ကားလို့စ်၏မင်္ဂလာဆောင် Worcestershire ရှိ Wood Norton Manor တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ထိုအခြိနျ၌ ပြင်သစ်တော်ဝင်မိသားစုသည်ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်။ ဘုရင်မ အလက်ဇန္ဒြာနှင့်သူမ၏သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်သော Duchess of Fife နှင့်မင်းသမီးဗစ်တိုးရီးယားတို့ဖြစ်ကြသည် Louise ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာတက်ရောက်သူ။
၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် Louise ကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူမ၏အငယ်ဆုံးသမီး Esperanza သည်အမွေဆက်ခံခဲ့သည် သူမကအေသင်အတွက်မင်္ဂလာဆောင်မှဝတ်ဆင်သော tiara ။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်ရတနာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် သူမ၏သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်သော Princess Maria da Glóriaလေလံတင်ပြီးနောက်၎င်းသည်မျိုးရိုးလိုက်သည် ယူဂိုဆလားဗီးယား၏မင်းသမီး။
Sussex ၏ Duchess of Duchess ၏ကျောက်သုံးလက်စွပ်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Christie's London တွင်သူတို့၏အရေးကြီးသောကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေး၏ကတ်တလောက်ထဲ၌ချစ်စရာကောင်းသောကျောက်တုံးသုံးချပ်များကိုပေါင်းထည့်သောအခါစဉ်းစားမိကြသည်။
Tiffany & Co. သည်ဤလက်စွပ်နှစ်ခု၏လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာစိန်ဖြူများပါရှိသည် (ပြီးပြည့်စုံသောအတုယူရန်အတွက် Duchess နှင့်အနီးဆုံး)၊ နောက်တစ်ခုမှာအဖြူရောင်စိန်နှင့်နီလာနှစ်လုံးဖြင့်ဖြစ်သည်။
Lot 56 - ကျောက်ခဲသုံးလုံးကျောက်ဆောင်၊ TIFFANY & CO ။
၂.၁၇ ကာရက်ရှိ Circular cut Diamond, Circular cut Diamond၊ ပလက်တီနမ် (London hallmarks)၊ ၂၀၀၉၊ လက်စွပ်အရွယ် I၊ Tiffany & Co.
Lot 126 - ပလက်တီနမ်၊ စပိ၊ ဒီးမုန်းလက်၊ Tiffany & CO ။
၁.၀၆ ကာရက်ရှိ Circular cut Diamond, Circular cut Sapphires, Platinum (London hallmark)၊ ၂၀၀၅ လက်စွပ်အရွယ် I၊ ထုတ်လုပ်သူ၏အမှတ်အသား Tiffany & Co.
GIA အစီရင်ခံစာ ၁.၀၆ ကာရက်၊ အီးအရောင်၊ VS1.06 ရှင်းလင်းမှု။
နောက်ထပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့“ trilogy” လက်စွပ်နှစ်ကွင်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်အဖြူရောင်စိန်နှစ်ဖက်နဲ့အလယ်တန်းနှစ်ထပ်ကိန်းဖြတ်ထားတဲ့ထောင့်ကျောက်မြောင်းတစ်ခုတပ်ထားပြီးတစ်ခြားကတော့လှပသော ၃.၀၁ ဖန်စီပြင်းထန်သောအဝါရောင်၊ ။ ဒီကွင်းနှစ်ကွင်းဟာလက်မှတ်မထိုးထားပါဘူး။
Lot 34 - ကျောက်တုံးသုံးလုံးနှင့်မြွေလက်စွပ်
Lot 127 - အရောင်စုံလင်လင်နှင့်စိန်လက်စွပ်
၃.၁၁ ကာရက်၊ ဘဲဥပုံဖြတ်စိန်များ၊ လက်စွပ်အရွယ် N ၏ဖန်စီပြင်းထန်သောအဝါရောင်ဘဲဥပုံသည်တောက်ပသောဖြတ်စိန်ကိုပြုပြင်သည်
GIA အစီရင်ခံစာ - ၃.၀၁ ကာရက်၊ ဖန်စီပြင်းထန်သောအဝါရောင်အရောင်၊ VVS3.01 ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု။
အချို့အတွက်ငါးပုစွန်များသည် Paraiba Tourmalines များ၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ သေချာတာကတော့ Sussex ရဲ့ Duchess of Dushess of an ဝတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပါ aquamarine ကော့တေးလက်စွပ် (Lady Diana ၏စုဆောင်းမှုမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်) သူမ၏ညနေခင်းမင်္ဂလာဆောင် reception ည့်ခံပွဲ၏အဖြူရောင် ၀ တ်စုံကိုသူမအား“ အပြာရောင်ထိတွေ့ခြင်း” ကိုထည့်ရန်၊ ဤကျောက်မျက်ရတနာကိုနောက်တဖန်ရှာဖွေနေသည်။
ပြီးတော့ကော့တေးကွင်းအကြောင်းပြောနေကြတာနဲ့အမျှ Christie ရဲ့ Important Jewels လေလံပွဲဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တင်ဆက်နေပါတယ် Margherita Burgener လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော Aquamarine၊ Rose Quartz နှင့် Diamond Dress Ring တို့ဖြစ်သည်။ ဤလက်စွပ်သည် ၃၁.၉၀ ကာရက်ရှိငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်စိန်ဖြူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးပွတ်နှင်းပွင့်ကျောက်ပြားများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
လောတ ၁၃၃ - AQUAMARINE, ROSE QUARTZ နှင့် DIAMOND DRESS RING, MARGHERITA BURGENER
၃၁.၉၀ ကာရက်ရှိဖြတ်တောက်ထားသောထောင့်မှန်စတုဂံဖြတ်ငါးမွေးငါးပွင့်၊ ပွတ်နှင်းပွင့်ကျောက်လင်းကျောက်၊
သငျသညျစုစုပေါင်းကြည့်ဖို့သွားချင်တယ်နှင့်ရဲရင့်ကြေညာချက်လုပ်လိုလျှင်, သင်သည်ဤလက်စွပ်နှင့်အတူကိုက်ညီနိုင်ဘူး Aquamarine နှင့်စိန်လက်ကောက် ဤတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော - ရင်ခုန်စရာနှလုံးပုံသဏ္diamondာန်စိန်များဖြင့်ဆွဲဆောင်နေသောငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း။
Lot 134 - AQUAMARINE နှင့် DIAMOND လက်ကောက်
သစ်တော်သီးနှင့်နှလုံးပုံသဏ္ဌာန်ငါးမွေးမြူသူများ၊ စက်ဝိုင်းပုံဖြတ်ထားသောစိန်များ၊ ပလက်တီနမ် (လန်ဒန်အမာခံများ)၊ ၁၇.၃ စင်တီမီတာ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်သည် ပို၍ သိမ်မွေ့သောရတနာများကိုပိုနှစ်သက်ပါကချစ်စရာကောင်းသောပေါင်းစပ်မှုသည်လည်ဆွဲနှင့်နားကပ်တစ်စုံဖြစ်နိုင်သည်။
Lot 78 - AQUAMARINE နှင့် DIAMOND လည်ဆွဲ
သစ်တော်သီးပုံသဏ္amarာန်ရှိငါးမွေးကန်များ၊ စက်ဝိုင်းပုံဖြတ်ထားသောစိန်များ၊ ပလက်တီနမ် (London hallmark)၊ ၇၆.၅ စင်တီမီတာ။
Lot 83 - AQUAMARINE နှင့် DIAMOND EARRINGS
ဖြတ်တောက်ထားသောထောင့်ဖြတ်စတုရန်းပေရှိသောငါးပုစွန်၊ စက်ဝိုင်းဖြတ်စိန်များ၊ ၁၈ ကာရက်ရွှေဖြူ (London hallmarks)၊ ၆.၉ စင်တီမီတာ။
ဒီရတနာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင် Christie's London, 8 King Street ကိုသွားပါ။ အရေးကြီးသောရတနာလေလံပွဲကိုဇွန် ၁၃ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်
Tags:ခရစ်စမတ် • မြင့်မားသောရတနာ • ကံ • လမ်းကြောင်းသစ်
မှတ်ချက်0ခုTiaras, သုံးကျောက်ကျောက် & aquamarines"